Isticmaalka Saliid Cadayda iyo halista caafimaad | WARARKA PUNTLAND
Home Caafimaadka Isticmaalka Saliid Cadayda iyo halista caafimaad
Inta aan waxtarka ama dhibka saliiddaan aan ka sheekaynin waa in aan ka hadlo waxa ay tahay marka hore, sababtoo ah qaladaad badan oo laga fahansan yahay ayaa jira saliiddaan.
Saliid cadeyda taariikh ahaan wax horay u jiri jiray ma ahayn oo iyada dhanba qarnigii hore dhexdiisa ayay warshaha awood u yeesheen in caleenta ay si kiimikeysan saliid uga dhalin karaan, saliidaas oo si raqiis ah u dabooli karto baahida suuqa ka jirtay markaas.
Marka maadaama ay noqotay jid cusub waxay warshadihii bilaabeen in wixii caleen la is dhihi karaba saliid ayaa laga samayn karaa in lagu dhaqaaqo waxaana soo baxay tobaneeyo geed oo saliid laga dhaliyay.
Dhibka iyo cabsida ka dhalatay isticmaalka saliid cadeyda ayaa waxay ka dhalatay:
1- Saliiddii oo aan si dabiici ah geedaha looga soo saaraynin oo horay loo yaqiinay sida macsarada, zaytuunka, qunbaha, laakiin saliid cadayda waxaaa loo soo saaraa qaab kiimikeed oo haddii aad riiqdid kaliya caleenta geedka saliid kaaga dhalan mayso ee waa in aad waxyaabo kale ku dartaa si saliid looga helo!
2- Cabisda labaad waa geedihii oo badan oo kala duwan iyo faa’idadii laga helaayay saliidda oo isu dheelli tirnayn taasoo caafimaadka saameyn ku yeelan karto, inkastoo cilmibaarista lagu sameeyay salidi cadeyda ay qaar ka mid ah geedaha la sheegay in caafimaadka wadanah uroonayn.
3- Shirkadihii samayn jiray oo aad u batay oo si aan kotarool lahayn ayaa loo sameeyaa, waxaana dhaca marmarka qaar in dhowr geed oo kala duwan saliidahooda la isku daro, isku daristaan oo dhibaato ka dhalan karto in saliiddii ay isla falgasho sidasne dhib uu ku imaan karo maadaama lagu arkay saliidaha qaar maaddo la yiraahdo “Erucic acid” oo aad ugu badan taasoo jirka sun ku ah.
4- Maadaama geedaha laga sameeyo saliid cadeyda ay leeyihiin shirif qofka uu la dhici karo saliida inuu isticmaal owaxaa lagu daraa maaddo sida Aashitada oo kale ah si urka loog baa’ibiyo saliidda.
5- Waxaa markaa ka dib lagu diraa daawooyin midabka badali karo ama caraf gooni ah u yeeli karo si dhibsasho la’aan ah loogu darsan karo cunnada.
Baynamaa saliidaha kale ama subaga caanaha laga culo aysan soo marin qaababkaas ayaa caafimaad ahaan waxaa lagula taliyaa qofka in uu ka fogaado saliid cadayda in uu cunno ku darsado ama ku karsado.
Waxaa intaa sii dheer in ay jiraan dad ka diyaariyay qoraallo kala duwan inkastoo aysan cilmibaaris sax ah ku imaan in ay dhici karto xanuuno badan oo ka mid yahay gaaska, wadna xanuunka iyo dheefshiid xumaha ku soo badatay dunida in ay xiriir la yeelay karto saliidaha cunnada lagu karsado ee kiimikeysan, waana wax dhici karo.
Waxa kale oo jiro oo la arkay waa arrinta aad ka dhawaajisay oo ah isu dheellitirnaan la’aant dufanka Omega 6 iyo Omega 3, taasoo salidiaha qaar ay ku badan tahay Omega 6 oo marmarka qaar u dhiganto 10 omega 6 iyo 1 Omega 3 ah.
Waxaana caafimaad ahaan la ogyahay hadduu isudheellitirkaas dhaco in Omega 6 keeni karo xanuuno badan oo ay ka mid yihiin kansarka ku dhaca naasaha dumarka iyo ugxansidaha.
Marka taladu waxay noqonaysaa, maadaama qaabka loo sameeyay saliiddaan ay dhici karto in dhibaato caafimaad keeni karo in loo wareegsado saliidaha kale ee la hubiyay caafimaadkooda oo soo jireenka ahaan jiray oo si dabiici ah loogu sameyn karo guryaha ama aanan warshad u baahnayn sida saliid macsarada oo dhulkeena laga heli karo
Qaladaadka waxaa ka mid ah in dadka badankodo aamineed in khudaarta iyo miraha ku sawiran gasacyada iyo caagadaha saliidda lagu keenay in ay saliidda ka samaysan tahay, taasi wax ka jiraa ma lahan ee waa xayaysiin, maadaama saliid cadayda loo yaqaano “Vegetable Oil” oo ah saliida qudaarta ayaa waxaa laguugu soo sawiraa qudaar kala duwan si niyadda laguguu dhiso!.
Waxaan halkaan kuugu soo bandhigayaa liiska geedaha laga sameeyo saliid cadayda ee ay habboon tahay in aad ka fogaato inta aad awooddid, maadaama cabsi laga muujiyaya waxayna kala yihiin:
Saliidaha kale ee caafimaad ahaan ku badalan karto waa kuwaan:
Coconut Oil (Saliida Qunbaha)
Olive Oil (Saliid Saytuunka)
Palm Oil (Saliid geed timireedka – Saliidaan waa laga helaa soomaaliya, waxayna ka mid tahay geedaha salidi cadayda laga sameeyo), haddii aad saliid cadeey isticmaalayso isticmaal Palm Oil, Magac afcarabi ayay ku timaadaa oo ah “Zayt Alnakhiil”
Avocado Oil (Saliida laga sameeyo miraha Avocado-ha)
Seasame Oil (Saliid Macsarada)
Dadbaa aaminsan in saliid kastoo geed laga sameeyo ay ka caafimaad badan tahay subagga xoolaha laga helo sida midda hilibka laga shiilo ama caanaha laga soo saaro, taasina ma ahan mid sax ah, ilaahay biniaadankaan wuxuu jirkiisa ugu talagalay wixii isaga uu abuuray oo dabiici ah in loo adeegsado, wixii si dabiici ah aad ku heshane jirkaaga diidi mayo wax dhib ahne ma gaarsiinayo laakiin wixii la soo badalo ama kiimiko lagu daro ama la soo warshadeeyo caafimaadka biniaadanka uma roona, taasi ha ahaato miisaanka aad mar waliba wax ku qiimaynaysid.
This post has already been read 120224
Previous articleGuddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo go’aan ka soo saaray sida loo maareynayo mooshinka madaxweynaha (Akhri)
Next articleXukuumadda Soomaaliya oo maanta heshiis la gashay Shirkadda Shidaal Baarista ee Spectrum ASA